Fri, Jun 5, 2020 at 4:21am
शुक्रबार, ८ कार्तिक २०७६,	आहाखबर	1.39K
कहिलेकाहिं शरीरमा कुनै जनवारले टोके जस्तै लाग्ने कालो वा गाढा निलो दाग देखिने गर्छ । यस्तो दाग शरीरमा कसरी भयो ? आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
शरीरमा प्लेटलेट्सको कमी किन हुन्छ ?
त्यस्तै शरीरमा चोटपटक लाग्न नदिने, धारिलो हतियारको प्रयोग नगर्ने लगायत विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ